Naya course » पि.बि.टी. वेष्टर्न इन्डस्ट्रिजले खाद्यान्न सहयोग गर्यो पि.बि.टी. वेष्टर्न इन्डस्ट्रिजले खाद्यान्न सहयोग गर्यो – Naya course
पि.बि.टी. वेष्टर्न इन्डस्ट्रिजले खाद्यान्न सहयोग गर्यो
कोहलपुर/ कोहलपुर नगरपालिकामा सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई राहातमा सहयोग गर्न नगरपालिकामा नगद तथा जिन्सी सामाग्रीहरु जुट्ने क्रम जारी रहेको नगरपालिकाले जनाएको
अरु स्थानीय तहको तुलनामा अपेक्षाकृत राहात भने जुट्न नसकेको नगरपालिकाका प्रमुख लूट बहादुर रावतको गुनासो छ । अहिले सम्म नगरपालिकामा सहयोग गर्ने सहयोगीहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रमुख रावतले भने–अरु पालिकाहरुको तुलनामा कोहलपुरमा सहयोगी मनहरु अपेक्षाकृत रुपमा देदिएनन् । यस्तो बेला सहयोगको अपेक्षा हामिले
धेरै गरेका छौं ।
शुक्रवार कोहलपुर ९ पीपरीमा रहेको पि.बि.टी. वेष्टर्न इन्डस्ट्रिज प्रा.ली.ले कोहलपुर नगरपालिकामा खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । प्रा.ली.का सञ्चालक सिमनाथ कडेंलले खाद्यान्न सामाग्री नगरपालिकाका प्रमुख रावतलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रा.ली.का सञ्चालक कडेंलल ५६ हजार ४ सय बरावरको खाद्यान्न हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
चक्की आटा, चिउरा,सोयाविन,मसुरोको दाल र खाने तेल लगायतका खाद्यान्न सामाग्रीहरु नगरपालिकामा बुझाएको कडेंलले नयाँ कोर्सलाई बताए । बिपद्मा परेकाहरुलाई बचाउनका लागि सरकारलाई सघाउन आफुले खाद्यान्न सहयोग गरेको कडेलको भनाई छ ।
हाल सम्म कोहलपुर नगरपालिकामा ६ लाख बढी नगद र झण्डै १ हजार किलो चामल लागायतका खाद्यान्न संकलन भएको छ ।